मङ्सिर ८ गते किन जाने काठमाडौं ? « Postpati – News For All
मङ्सिर ८ गते किन जाने काठमाडौं ?
अर्जुन सुबेदी/मङ्सिर ३, काठमाडौं । बिश्व राजनैतिक परिवेशको बदलिदो अवस्था र बिकशित घटना क्रमहरुको कारण बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ प्रयोग र संश्लेषणको खाँचो छ। यो यथार्थ लाई स्वीकार गर्दै एउटा बिशिष्ट उच्चाई सगैँ नेपालबाटै नयाँ ढङ्गले बिश्ब कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हाक्ने निति योजना कार्यक्रमहरुका साथ विप्लव नेतृत्वको नेकपा अगाडि बढिरहेको छ भने। केही सत्ता लिप्त सत्ता धारी दलहरु भने संबिधानको दुहाई दिदै संबिधान कै उलंघन र अपहेलना गरिरहेका छन्।
यसका प्ररसस्त प्रमाणहरु नेपाली जनताले लेखाजोखा गरिरहेका छन्। उदाहरण को रुपमा केहि मुख्य घटनहरुनै काफी छ।
संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख समाजको सुरुवात र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ। यसका लागि समाजवादी अर्थतन्त्रको निमार्ण सामाजिक राजनैतिक संकार बिकास र ब्यबस्थापनको लागि सिन्को नभाँच्ने अनि संबिधानको पहरेदार ठान्ने जनतालाई भ्रममा राख्ने। जनताको सामन्य लोकतान्त्रिक अधिकार माथि नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने । जनताको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी लगायतका विषयहरु मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको भएपनि अहिलेको सरकार शिक्षा स्वस्थ्य सुरक्षा जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारी करण गर्ने भ्रष्टाचार कमिसन र दलालीमा चुर्लुम डुबेको सरकार र अहिलेका राज्य संचालकहरुबाट जनता अाजित छन्।
जनता स्वत: स्पुर्त सडकमा छन। यसले पनि मंसिर ८ कार्यक्रमको महत्व प्रष्ट गर्दछ।
सबै परिवर्तनका घटनाहरुको सुरुवातिमा केहि समित ब्यक्ती निश्चित बिचारले नेतृत्व गरि अगाडी बढाए पछिमात्र संघर्षले मुर्तरुप लिन्छ र सम्पूर्ण शक्तिहरु केन्द्रिक्रित हुने बातावरण बन्छ । यसको पुष्टि मार्क्सवादको पद्धति विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ।
त्यसकारण अहिले नेपाली क्रान्तिको यो महत्वपूर्ण क्षणमा विप्लव लगायतका नेकपाका नेताहरुको नेतृत्वदाहि भूमिका रहेता पनि हामी सम्पूर्ण सचेत बौद्धिक वर्ग सबै तह तत्वका नेपालीहरुले अब यो स्तरमा उठेको जनसंघर्षलाई खालि अमुख नेता र पार्टीको मात्र काम हो भनेर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट टाडा हुनु भनेको अर्को मुर्खता हुनेछ।
तसर्थ महान राष्ट्रनिमार्ण अभियानमा हामी जुनसुकै पार्टी या संस्थामा अबद्ध भएता पनि निति योजना कार्यक्रम र देशको निम्ति गरिएको योगदानलाई अाधार मान्दै नेकपाको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणको अभियानमा सबै सचेत र बौद्धिक नेपाली नागरिकहरु एक जुटहुन जरुरी छ। खासगरी अहिले हामी यूवाहरुले राज्यको निति योजना कार्यक्रम राज्य संचालकहरुले गरेको गल्तीको भाषिक बिरोध मात्र गरेको पाइन्छ ।
तर यतिले तपाईं हामीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण हुनेवाला छैन। हामी वौद्धिक र सचेत भनिएका यूवाहरु एउटा कुनै पेसा वा रोजगारीमा मात्र सिमित भएर सम्पूर्ण देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने निति कार्यक्रम र योजनाहरु चाहिँ त्यहि भ्रष्ट दलाल पुरातन सोच र निच मानसिता भएकाहरुलाई जिम्मा दिएर किनाराबाट बिरोधको लागि बिरोध मात्र होइन राज्यको बागडोर प्रगतिशील क्रान्तिकारी युवाहरूले सम्हाल्ने बातावरण निर्माण गर्न र राज्यको ब्यवस्था परिवर्तन सगै निति कार्यक्रम निमार्ण गर्ने प्रमुख बाटो राजनैतिक बाटोमा योजना बद्ध र संगाठानिक रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र निर्णायक संघर्षमा होमिए मात्र हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन्छ।
अहिले रहेका धेरै दलहरु मध्ये मुख्यत कांग्रेस एमालेको समाज रुपान्तरणमा केहि एतिहासिक योगदान छ। अब यि पार्टीका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी र सचेत युवाहरुले बुझ्ने पर्ने कुरा के हो भने समाज विज्ञान र प्रबिधिमा आएको बिकासलाई ब्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था भनेको वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। यो विश्वकै असफल दलाल पुँजीवादबाट देशलाई बिकसित र सबै पैसा जाति क्षेत्र लिङ्ग र तह तत्वका जनतालाई अार्थीक संवृद्धि सहित अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्न।
त्यसकारण हिजोका इतिहासमा केहि योगदान गरेका काँग्रेस एमाले लगाएतका दललाई इतिहासिक संग्रहालयमा संरक्षण गर्दै एमाले कांग्रेस लगायतका सबै दलका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिकहरुले देश जनताको मुक्तिका लागि ब्यबस्था परिवर्तन को संघर्षमा अघाडी बढ्नुको बिकल्प छैन।
त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको लडाइँ नै अहिलेको सम्पूर्ण नेपालीहरुको कार्यभार हो। वैज्ञानिक समाजवादबाट मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ अनि मात्र नेपाल र नेपालीको मुक्ति संभव छ। हामी सबैलाई अवगत नै छ नेपालमा जुन मोडलको ब्यवस्था र संविधान छ। त्यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग हाम्रो छिमेकी देश भारतमा ७० बर्षको हाराहारीमा भयो । अहिलेको नेपालको जस्तो राजनैतिक ब्यवस्थाको प्रयोग। हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौ। तापनि भारतका अर्बौं जनता जनजिवन कस्तो छ। अनि भारत देशकै अार्थीक राजनैतिक सामाजिक सुरक्षा स्वस्थ्यको अबस्थामा कुन स्थानमा छ। धेरै व्यख्या गर्नु पर्छ होला जस्तो लाग्दैन।
त्यसैले हामी पनि अब यो असफल ब्यबस्थालाई बर्षौ प्रयोग गरी परिणाम कुर्नु भन्दा इतिहासबाट पाठ सिक्दै । अहिले दलाल पुँजीवादी ब्यवस्था देश र जनताको हितमा छैन यसको खारेजी गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा सबै देश भक्त सचेत बौद्धिक श्रमजिवी सम्पूर्ण यूवाहरु एउटै संघर्ष को मोर्चामा लड्नु पर्छ। यो कुनै पार्टी र नेताको लागि नभइ वैज्ञानिक समाजवाद सम्पूर्ण जनता र देशको लागि खाँचो छ । अनि मात्र नेपाल र नेपालीको मुक्ति संभव छ ।
त्यसैले मङ्सिर ८ गते खुल्लामञ्च जाउँ, बैज्ञानिक समाजबादका लागि अघि बढौ ।
३ मंसिर २०७५, सोमबार को दिन प्रकाशित